मङ्सिर १ बाट विद्युतीय राहदानी, के–के छन् विशेषता ?
गृहपृष्ठ » समाचार » मङ्सिर १ बाट विद्युतीय राहदानी, के–के छन् विशेषता ?
काठमाडौं । आउँदो मङ्सिर १ गतेदेखि विद्युतीय राहदानीको परीक्षण वितरण सुरु गरिने भएको छ ।
विद्युतीय राहदानीको पोलिकार्बोनेट पानाभित्र जडान गरिएको डिजिटल चिप्समा राहदानी बाहकको सबै विवरण सुरक्षित हुन्छ ।
नयाँ राहदानी वितरण भए पनि पुरानो एमआरपी राहदानीको म्याद नसकिएकाको हकमा म्याद रहुन्जेल त्यही राहदानीलाई नै मान्यता दिइने छ ।